စီးကရက်မှာမှ နီကိုတင်းပါနေတာ မဟုတ်ပါ - Hello Sayarwon
စီးကရက်မှာမှ နီကိုတင်းပါနေတာ မဟုတ်ပါ
နီကိုတင်းလို့ ပြောလိုက်ရင် စီးကရက်ကို ပြေးမြင်မယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါဆို စီးကရက် မသောက်ရင် နီကိုတင်း ကင်းပြီပေါ့ဟုတ်လား…… မဟုတ်သေးပါဘူး။ နီကိုတင်းက စီးကရက်မှာတင်မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာလည်း နီကိုတင်း ပါနေတယ်ဆိုတာ သိထားပြီးပြီလား………
နီကိုတင်းဆိုတာ အန္တရာယ်များပြီး အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတဲ့ အရာရယ်လို့ အများက လက်ခံထားကြတဲ့အရာပါ။ စွဲလန်းစေတတ်သလို ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိခိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူတွေက ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ခက်နေကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် နီကိုတင်းကို စီးကရက် တစ်ခုတည်းမှာတင် မဟုတ်ဘဲ အခုပြောပြမယ့် အရာတွေမှာလည်း တွေ့ရပါသတဲ့။
နီကိုတင်း ပါဝင်နေသော ဆေးလိပ်မဟုတ်တဲ့ အရာများ
ဆေးလိပ်မဟုတ်ဘဲ နီကိုတင်းပါဝင်နေတဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးမိနေနိုင်တဲ့အရာတွေက
ခရမ်းချဉ်သီးမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် နီကိုတင်း ၇.၁ ကနေ ၇.၃ ng ပါဝင်နေပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး အစိမ်းတွေမှာ နီကိုတင်း ပါဝင်မှုက ပိုများပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးက မှည့်လာလေလေ နီကိုတင်း ပါဝင်မှု နည်းလာလေလေပါ။ ဒါကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီး စားတဲ့အခါ မှည့်တာလေးကို စားစေချင်ပါတယ်။
အာလူးမှာ နီကိုတင်း ပါဝင်မှုက ၁၅ ng အထိ ရှိပါတယ်။ အာလူးမှာက အစိမ်းရောင်သန်းနေတဲ့ အာလူးတွေ အညှောင့်ပေါက်နေတဲ့ အာလူးတွေမှာ နီကိုတင်း ပါဝင်မှုက မြင့်ပါတယ်။ အာလူးအခွံက နီကိုတင်း အဓိက ပါဝင်နေတဲ့ နေရာပါ။ ဒါကြောင့် အာလူး စားတဲ့အခါ အခွံကို စင်အောင် နွှာပါ။
ခရမ်းသီးကတော့ နီကိုတင်း ပါဝင်မှုအမြင့်ဆုံး အသီးအနှံ တစ်မျိုးပါ။ ဆေးရွက်ကြီးပြီးရင် ခရမ်းသီးက နီကိုတင်း ပါဝင်မှု အများဆုံးပါ။ ခရမ်းသီး ၁၀ ဂရမ်မှာ နီကိုတင်း ပါဝင်မှုက စီးကရက် တစ်လိပ်မှာ နီကိုတင်း ပါဝင်မှု ပမာဏနဲ့ ညီပါတယ်။
လက်ဖက်စို၊ လက်ဖက်ခြောက်စတာတွေမှာလည်း နီကိုတင်း ပါဝင်နေပါတယ်။ သဘာဝ လက်ဖက်ခြောက်တွေထက် နှပ်ရန် အသင့်လုပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ခြောက်နဲ့ အသင့်ဖျော် လက်ဖက်ရည်ထုတ်တွေမှာ နီကိုတင်း ပါဝင်မှုက ပုံမှန်ထက် ပိုမြင့်ပါတယ်။
ငရုတ်ပွကလည်း ကျန်းမာရေး အာနိသင်များသလို နီကိုတင်း ပါဝင်မှုကလည်း ၁၀၀ ဂရမ်မှာ ၇.၇ ကနေ ၉.၂ မီလီဂရမ်လောက်အထိ ရှိပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီက နီကိုတင်း ပါဝင်နေတယ်လို့ ပြောရင် အံ့ဩနေလောက်ပါတယ်။ ပန်းဂေါ်ဖီ အရွယ်တော် တစ်ပွင့်စာမှာ နီကိုတင်းက ၁၆.၈ ng ပါဝင်နေပါတယ်။
နီကိုတင်း ပမာဏ လျော့ကျစေဖို့ ဘာလုပ်မလဲ ……….
အခုပြောခဲ့တဲ့ အသီးအနှံတွေမှာ နီကိုတင်း ပါဝင်နေတာ မှန်ပေမယ့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီအသီးအနှံတွေက နီကိုတင်း ပါဝင်တယ်ဆိုပေမယ့် စီးကရက်လောက် ပါဝင်မှု မမြင့်တာတွေအမှန်ပါ။ ဒါတွေက စွဲလန်းစေလောက်တဲ့အထိ ပမာဏ မများသလို ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေလောက်အောင်လည်း မပြင်းထန်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီအသီးအနှံတွေက နီကိုတင်း ပါဝင်မှု လျော့ပါးစေဖို့ဆိုရင် သေချာ ကျက်အောင် ချက်ပြုတ်ဖို့ ပြောပါရစေ။ နောက်တစ်ချက်က သေချာ မှည့်နေတာကို ရွေးဖို့နဲ့ အမှည့်လွန်နေတာမျိုး၊ အညှောင့်ပေါက်နေတာမျိုးကို မရွေးဖို့ပါ။ အခွံတွေကို သေချာလေး သင်ပေးဖို့လည်း လိုပါမယ်။
Did You Know These Common Foods Contain Nicotine? https://aspenvalleyvapes.com/did-you-know-these-common-foods-contain-nicotine/ Accessed Date 8 June 2020
Nicotine In Vegetables: 20 Pounds Of Eggplant Equivalent To 1 Cigarette https://www.huffpost.com/entry/nicotine-in-vegetables_n_1597087 Accessed Date 8 June 2020
ဘယ်နီကိုတင်းအစားထိုးကုထုံးက သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးလဲ